Kusolwa nephoyisa kwabesilisa abasecaleni lokushaya - Ilanga News
Home Izindaba Kusolwa nephoyisa kwabesilisa abasecaleni lokushaya
Kusolwa nephoyisa kwabesilisa abasecaleni lokushaya
UMNU Sihle Zulu waseLamontville othi ushaywe waze waqhephuka izinzipho ngabesilisa abathathu obekukhona kubona nephoyisa. ISITHOMBE: SITHUNYELWE
KUSOLWA nephoyisa kwabesilisa okuthiwa bashaye owesilisa othandana nabobulili obufana-yo, kubangwa indaba yokugudluza imoto ebivimbe umgwaqo uGambushe Road, eLamontville, eThekwini ngoLwesihlanu.
UMnu Sihle Zulu, , uthi usesaba ngisho ukuphuma kubo emuva kokuba eshaywe ngabesilisa abathathu ngoba ecele ukuba kugudluzwe imoto eya-yivimbe umgwaqo.
Uthi wayehamba ngemoto nomngani wakhe nomfowabo, bafika kulo mgwaqo kuvimbe iPolo, bacela kowesifazane ongumnikazi wayo ukuba maka-yigudluze ukuze badlule.
Utshele ILANGA ukuthi kwa-vele kwaphendula laba besilisa abebemi eduze kwalo wesifaza-ne, bamthuka naye waphendula, kwabe uyinyathele emsileni.
“Baqonda ngqo kithina sengi-ngene emotweni, bangidonsa, bangishaya, bangibopha ngoza-nkosi. Bangifaka evenini baha-mba nami baya ngasemathuneni aseLamontville.
“Baphinda bajika bangiyisa esiteshini samaphoyisa. Sithe sifika bangivalela esitokisini, bangishaya bethi mangikhiphe izinzipho engizifakile, bethi ngiyi-ndoda enjani efaka izinzipho. Kwahlula ngisho ngibatshela ukuthi ngizifake ngemali yami, kodwa baqhubeka bangishaya,” kusho yena.
Uthi bamdedela ebusuku, kwathi uma ebacela ukuba ba-mgodukise ngoba wayesesaba ukuthi uzogcwelezwa ngabantu, banqaba.
“Ngahamba ngaze ngayofika ekhaya ngezinyawo. Emuva kwalesi sehlo, sengihlala ngo-kwesaba. Le nto ingilimazile kakhulu nasemqondweni.
“Bengingazitsheli ukuthi kulesi sikhathi samanje kusekhona abantu abazonda izitabane ka-nje.
“Ngifisa kwenzeke ubulungi-swa, baboshwe baze bakhumbule lolu suku abangishaya ngalo, ngikhala bengenanembeza,” kusho uMnu Zulu.
UMnu Nkululeko Khanyi we-nhlangano eluleka abanengci-ndezi, i-Ungazibulali Awareness Campaign, uthi kuyadumaza ukuthi kungabe kusenabantu abenza izinto ezinjengalezi emphakathini.
“Okufike kwasithinta kakhulu odabeni lwakhe wukuthi kulabo abebemshaya, bekukhona nabomthetho, okuyibona okufanele bavikele isizwe kulesi sihlava,” kusho uMnu Khanyi.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, uthi kuvulwe icala lokushaya ngenhloso yokulimaza. Uthi okwamanje akekho osaboshiwe njengoba amaphoyisa asenza uphenyo.
Previous articleSihlela ukuwaphanyeka emgibeni isilomo
Next articleuMakitaza ubonge uBhodloza ngengoma